एमाले माओवादी एकीकरण प्रक्रिया अघोषित रुपमा स्थगन ! - Kendrabindu Nepal Online News
एमाले माओवादी एकीकरण प्रक्रिया अघोषित रुपमा स्थगन !
२ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०६:१७
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच आपसी अविश्वास बढ्दै जाँदा एकीकरण प्रक्रिया अघोषित रुपमा स्थगन भएको छ । परिणामस्वरूप दुवै पक्षबाट तिक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेका छन् भने दुई पार्टीका अध्यक्षबीचको बैठक पनि पातलिँदै गएको छ ।
माओवादी नेताहरुले आफ्नो पार्टी सरकारमा भए पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको गुनासो गर्न थालेका छन् । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले सचिव सरुवा देखि बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरुलाई बाहिर राखेर निर्णय गरिएको गुनासो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
पछिल्ला गतिविधिले एकीकरण प्रक्रियालाई अझै पछि धकेलेको एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुको बुझाइ छ । ‘दुई पक्षबीच चिसोपन बरण एकीकरण प्रक्रिया अहिले स्थगनमा छ,’ माओवादी केन्द्रका हेडक्र्वाटर सदस्य मणि थापाले भने, ‘सरकार सञ्चालन र अन्य विषयमा राम्ररी सल्लाह हुन सकेको छैन । त्यसले अविश्वास बढाएको छ ।’
एमाले नेताहरु भने नकारात्मक कुरा बाहिर ल्याउँदा अविश्वास बढेको बताउँछन् । ‘सरकार सञ्चालन जटिल प्रक्रिया हो । एकै दलका सरकार हुँदा त समस्या हुन्छ । अहिले दुई पार्टीको सरकार छ,’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘कुनै समस्या भए मन्त्रिपरिषद बैठकमा वा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रका नेता र मन्त्रीहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिले दुई दलबीच चिसोपन बढाएको छ ।’
Prevसगरमाथा आरोहणः मौसमले साथ नदिँदा मंगलबार सय आरोही रोकिए
एक वर्षमा भारतबाट १८ अर्बको बिजुली खरिद !Next